Archive du 26-nov-2021
Kopisoroka amin'ny fifidianana... Tambazana moto ireo ben'ny tanàna
Tonga nanolotra moto ho an'ny Ben'ny tanàna manerana ny distrikan'ny Lalangina ny Minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana Atoa Pierre Houlder Ramaholimihasy omaly alakamisy 25 novambra 2021.
Edito Mandiso anjara!
Isaorana ny mpahary aloha ary isaorana ihany ireo mpanapa-kevitra ihany koa fa mba efa manomboka milatsaka ny orana.
Rehefa avy nokotiany ka tsy zakany Tovovavy 18 taona maty notifirin’ilay miaramila
Tovovavikely iray vao 18 taona monja mpianatry ny CEG no maty notifirin'ny miaramila iray kilasy faharoa, ankitsirano.
Fisondrotan-karama 11% Tsy mifanaraka amin’ny fidangan’ny vidim-piainana, hoy ny SSM
Ho fanamarihana ny andro hiadiana amin’ny herisetra atao amin’ny vehivavy na ara-batana na saina na nofo dia nanao fanambarana tetsy amin’ny Le Glacier Analakely omaly ny firaisankina sendikaly eto Madagasikara na SSM
Fitondrana Rajoelina Fitaovam-piadiana no tena maha maika azy!
Miteraka fanamarihana sy fanakianana sesilany avy amin’ny olom-pirenena sy ny firaisamonim-pirenena ny voalaza fa fisian’ny vinan’ny Fanjakana hividy fitaovam-piadiana mitentina 448 miliara ariary amin’ny Indianina.
Vaomiera mpanadihady ny ady tany Hanomboka amin’ny raharaha Antanandrano
Nanomboka omaly teny Tsimbazaza ny fivorian'ireo solombavambahoaka mpikambana ao anatin’ny vaomiera mpanadihady ny ady tany eny amin'ny Antenimieram-pirenena izay ahitana solotenan'ny vondrona parlemantera
Minisitry Patrick Rajoelina atsy La Réunion Nohororakorahan’ireo Diaspora mpanohitra
Nandrasan’ireo Malagasy mpanohitra ao anatin’ny Miara-manonja mpila ravinahitra atsy amin’ny Nosy La Réunion teo amin’ny Consulat Général Malagasy ao Saint-Dénis tamin’ny alalan’ny sora-baventy sy hetsika ary tabatababa
Fanararaotana mamoafady amin’ny ankizy 2 isam-bolana ireo no manatona ny Ecpat France
Mirongatra ny fanararaotana mamoafady hatao amin’ny ankizy indrindra fa amin’ny tambajotran-tserasera amin’izao raha araka ny fanazavan’ny Ecpat France omaly notarihin’ny taleny Dr Annick Randriarimanana
Auguste Paraina “Aoka hitandrina amin’ny vava avoaka!”
Nangataka fanampiana tamin'ny firenena egyptianina i prezida Andry Rajoelina mba hanamboarana ny lalana mikodana,
Foara ekonomika ho an’Analamanga Nanomboka omaly etsy Mahamasina
Nanomboka omaly etsy amin’ny kianjan’i Barea etsy Mahamasina haharitra 4 andro ilay foara ara-toekarena karakarain’ny Madavision.